20 Essentials Archives • Zivo SUCCESS
20 Essentials Kusuma 20 Essential Resources: Kuronga Mhuri uye Utano hwekubereka muZvirongwa zvisina kusimba
Christopher LindahlKatie MorrisGathari NdiranguEric Ramirez-Ferrero Mbudzi 16, 2021
MOMENTUM Integrated Health Resilience inofara kubatana neRuzivo SUCCESS kukuunza iyi yakaunganidzwa muunganidzwa wezviwanikwa zvinoratidzira kukosha kwekuzvidira kuronga mhuri uye hutano hwekuzvara. (FP/RH) zvirongwa uye masevhisi mune isina kusimba ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa2560 Views
Muunganidzwa uyu unosanganisira musanganiswa wezviwanikwa zvakaiswa mumisoro yakawanda, kusanganisira: conceptual framework, normative guide, kumiririra mutemo, etc. Yese yekupinda inouya nepfupiso pfupi uye chirevo chekuti nei ichikosha. Tinovimba ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa11774 Views
20 Essentials Makondomu uye Kuronga Kwemhuri: 20 Essential Resources
Kirsten KruegerReana ThomasHannah Webster Gumiguru 15, 2021
Vanhu vazhinji vanokanganwa simba remakondomu sechombo chekuronga mhuri. Muunganidzwa uyu unotiyeuchidza kuti makondomu anoramba achishanda sei kunyangwe kuvandudzwa kweFP/RH kuchimuka.
chat_bubble0 Comment kuonekwa2496 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa2910 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa4202 Views
20 Essentials Kusuma 20 Zvishandiso Zvinokosha paBazi Rakavanzika uye Kuronga Mhuri
Elizabeth CorleySophie Weiner Chivabvu 6, 2021
The Sustaining Health Outcomes kuburikidza nePrivate Sector (SHOPS) Plus purojekiti inofara kubatirana neRuzivo SUCCESS kukuvigira muunganidzwa wakasarudzika wezviwanikwa zvinoratidzira kukosha kweiyo yakazvimirira chikamu mumhuri. ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa3094 Views
20 Essentials 20 Essential Resources for Population, Utano, uye Environment (PHE)
Kristen P. PattersonTess E. McLoudElizabeth Tully Mbudzi 18, 2020
Muunganidzwa mutsva uyu uchapa huwandu hwevanhu, utano, uye nharaunda nharaunda ine mhando, zviri nyore kuwana zviwanikwa zvekusimudzira kuchinjanisa ruzivo.
chat_bubble0 Comment kuonekwa7435 Views
20 Essentials 20 Yakakosha FP/RH Zviwanikwa zveFrancophone Zvirongwa
Aïssatou ThioyeSophie Weiner Gunyana 10, 2020
Muunganidzwa wakarongedzwa neRuzivo SUCCESS uye Kuronga Kwemhuri 2020 kune nyanzvi dzekuronga mhuri dzinogadzira nekuita zvirongwa zvakaderera- uye nyika dzine mari yepakati dzinotaura chiFrench.
chat_bubble0 Comment kuonekwa2252 Views
Aïssatou ThioyeSophie Weiner Gunyana 9, 2020
Muunganidzwa wakarongedzwa neRuzivo SUCCESS uye Kuronga Kwemhuri 2020 kune nyanzvi dzekuronga mhuri dzinogadzira nekuita zvirongwa munyika dzine mari yakaderera nepakati peFrancophone.
chat_bubble0 Comment kuonekwa2507 Views
20 Essentials 20 Zvishandiso Zvinokosha paMagariro Evanhu Nekuronga Mhuri
Ruwaida SalemAnne Kott Chivabvu 7, 2020
Kutanga kwedu 20 Essential Resources muunganidzwa, yakarongedzwa neUSAID's Passages Project, inokwevera pamwe chete izvo zvaunoda kuziva kuti unzwisise uye kuyera magariro emagariro uye tsika dzemagariro-kuchinja kupindira uye kuzviisa mubasa rako..
chat_bubble0 Comment kuonekwa3408 Views